Njikwa Nne na Nna na TimeAway na ngwaọrụ gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Etu ị ga - esi nyefe ụmụaka gam akporo ngwaọrụ n’enweghị nsogbu ọ bụla
E nwere ọtụtụ ihe mere anyị ji kwesị ijide n'aka Nlezi anya tupu ịnye ụmụaka obere ngwaọrụ gam akporo, ihe ndị nne na nna nwere ibu ọrụ na-emekarị bụ ndị na-echegbu onwe ha banyere ihe ha ga-ahụ n'ime ha, ozugbo e nyefere ha ya n'oge ụfọdụ.
Dị ka e nwere ụfọdụ ihe enyemaka maka iPad, mgbe ị na-enye nchebe na ekwentị mkpanaaka tupu enyefee ya ụmụntakịrị, otu ọnọdụ a ga-akpọlite ​​ndị nwere gam akporo sistemụ. Ugbu a, anyị ga-ekwupụta ụzọ ọzọ dị mma nke sitere na aka nke ngwa, nke ị nwere ike ibudata na Playlọ Ahịa Google; Ruo ugbu a n'isiokwu a anyị ga-anwa ịkọwa ihe kpatara eji eji ngwa a, na-elekwasị anya mgbe niile na mmasị anyị na ọdịmma nke ụmụntakịrị.
Nchedo ụmụaka na TimeAway gam akporo App
TimeAway bụ ngwa maka gam akporo mobile ngwaọrụ nke nwere ebumnobi bụ isi nke ịbelata ụmụntakịrị, ụdị igodo ma ọ bụ nyocha ha ga-enwe na kọmpụta ndị a. Ọ bụ ezie na ngwa ahụ bụ n'efu kpamkpam, onye ọrụ ga-edebanye data gị na akaụntụ nke ndị mmepe ya iji nwee ike soro ọrụ ọ bụla a ga-arụ na ha. Obi abụọ adịghị ya na ị bụ nnukwu uru, ebe nna ga-enwe ohere igbachi ma ọ bụ kpọghee ekwt mgbe ị na-enwe mmasị n'ụdị ụfọdụ nke enyo enyo. Na mgbakwunye na nke a, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ebe ụmụntakịrị nọ na ekwentị mkpanaka ndị a, nke a nwere ike ịbụ ihe ọzọ dị mkpa kachasị mkpa ịkọwapụta, ma ọ bụrụ na etinyere ngwa ọrụ na ekwentị mkpanaaka na ụmụaka ndị nwee ha, bụ ndị na-eto eto.
Ozugbo anyị zụrụ ngwa a ma wụnye ya na ngwaọrụ mkpanaka anyị, anyị ga-emepe Akaụntụ Akaụntụ na TimeAway site na otu kọmputa ahụ na ngwa ọrụ na-agba ọsọ; ikikere nke anyi kwesiri inye bu ndi nke anyi, nke ahụ bụ, anyị ga-enye ikikere ngwa gam akporo a ka anyị wee nwee ike ijikwa ụfọdụ arụmọrụ site na otu ngwaọrụ gaa na nke ọzọ.
N'ihi njirimara a, nke kachasị mkpa, ma ntinye nke ngwa ahụ na ndebanye aha ga-eme na njedebe abụọ ahụ, nke ga-enyere ha aka ijikọ ibe ha mgbe niile.
N'oge ndebanye aha na ngwa gam akporo a, onye ọrụ (onye ga-abụ nne na nna ma rụọ ọrụ dị ka onye nchịkwa) ga- setịpụrụ na paswọọdụ nọmba 5, Koodu ga - egbochi ọrụ niile anyị chere na ọ dị mma ịme, na obere ekwentị mkpanaaka.
N'ihi usoro nchekwa a, ụmụaka agaghị enwe ike iwepụ ngwa ahụ, Ọfọn, oge ha chọrọ ime nke a, a ga-agwa ha ka ha tinye akara ọnụọgụ 5 nke anyị kwuburu na ha ga-ahazi.
Ọnọdụ na-adọrọ mmasị ka dị na njikwa dịpụrụ adịpụ nke iji ekwentị mkpanaaka nke ụmụntakịrị. Ndị nne na nna ga-abanye naanị ekwentị ha setịpụ oge ụfọdụ ka ụmụ gị na-akparịta ụka ma ọ bụ na-agagharị na YouTube portal (dị ka obere ihe atụ nke njikwa a).
TimeAway dị ka ngwa gam akporo na-ejikọ na Google Maps, nke a bụ uru ọzọ pụrụ iche ebe ọ bụ na anyị ji ya, anyị ga-enwe ike ịchọta ụmụaka ebe ọ bụla ebe ha nọ, ọ bụrụhaala na ha na-ebu ekwentị ha.
Na njedebe nke ụbọchị, ndị nne na nna nwere ike ịbịakwute nyochaa obere akụkọ gbasara ihe ụmụ gị mere na ngwaọrụ ha dị iche iche, nke nwere ike ijikwa ịchịkwa ma ọ bụ machibido ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a; Ọ bụ ezie na enwere ike ibudata ma tinye ngwa ahụ n'efu na ngwaọrụ gam akporo gị, onye nrụpụta atụpụtala ụdị nke adịgboroja maka ọnụahịa ezi uche dị na ya, ebe enwere uru karịa iji «Android Parental Control».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu ị ga - esi nyefe ụmụaka gam akporo ngwaọrụ n’enweghị nsogbu ọ bụla
Etu esi etinye ngwaọrụ gam akporo anyị ịrahụ ụra oge ụra
Etu esi edozighari onyonyo na nha atule na Windows?